संजीवन महर्जन - साप्ताहिक
संजीवन महर्जनका लेखहरु
वि.संं. १८४० को दशकतिर नेपालमा कार्यरत छँदा कर्कपेट्रिकले लेखेको एन एकाउन्ट अफ किंगडम अफ नेपाल शीर्षकको पुस्तकमा चितवनको जैविक विविधता यो क्षेत्रका लागि मात्र नभएर संसारकै लागि महत्वपूर्ण छ । उक्त पुस्तकको पृष्ठ १८ मा लेखिएको छ – सोमेश्वर पहाडदेखि पूर्व कोसीको बेसिनसम्म फैलिएको चारकोसे झाडीबाट नेपालका शासकहरू हरेक वर्ष २ सयदेखि ३ सय हात्तीका छावा समातेर भारतका रजौटाहरूलाई बिक्री गर्छन् ।
संजीवन महर्जन, असार २९, २०७३
ती तान्त्रिकले शुभ साइत पारेर आकाशमा विचरण गरिरहेका भैरवलाई टुँडिखेलमा झारे ।
एउटा अधुरो प्रेमकथा
संजीवन महर्जन, असार ९, २०७३
नेपालको इतिहासमा राणा वंशको महत्त्वपूर्ण स्थान छ । उनीहरूको अभिमानले त्यतिबेला आफूबाहेक अरू सबै शासक वर्गलाई खास ठकुरी मान्दैनथ्यो । उनीहरूको यस्तो अभिमानको खुलासा गर्ने एउटा प्राचीन प्रेमकथा :
संजीवन महर्जन, वैशाख ३०, २०७३
आफ्ना पतिले नै आफूमाथि चरित्रहीनताको आरोप लगाएपछि दरबारभित्रै नजरबन्दमा बस्न बाध्य भएकी महारानी राजेन्द्रलक्ष्मी वि.सं. १८३४ मंसिर ६ गते राजा प्रतापसिह शाहको निधनपछि मात्र नजरबन्द मुक्त भइन् ।
संजीवन महर्जन, वैशाख २५, २०७३
नेपालको इतिहासमा शत्रु वा विरोधीले लगाएको चुक्लीका कारण आफ्नो ज्यानसहित सर्वस्व गुमाउने वीर–वीरांगनाहरूको कुनै कमी छैन । विरोधीको चुक्लीकै कारण आफ्नो पछ्यौरामा बदनामीको दाग बेहोर्न बाध्य भएकी थिइन– महारानी राजेन्द्रलक्ष्मी ।
संजीवन महर्जन, वैशाख १८, २०७३
नेपाल राष्ट्रको एकीकरण अभियान एउटा व्यक्तिको लहड वा रहरले भएको होइन । यसका पछाडि थुप्रै योद्धा, राजनीतिज्ञ, रणनीतिकारहरूको रगत र पसिना खर्च भएको छ । यस क्रममा कसैको बढी कसैको कम चर्चा भएको पाइन्छ । यस्तै आफ्नो योगदानको तुलनामा कमै चर्चा गरिएका पात्र हुन्– सरदार रामकृष्ण कुँवर ।